SHAMBO SHAAMBO AH OO LOOGU TALAGALAY CARRUURTA, IYO SIDOO KALE NOOCYADA KALE EE ALAABTA - GURI, GURI
Ilaali oo ha yeelin waxyeello! Daawooyinka durdurrada ee loogu talagalay ilmo-yaryar: shampoos, dhibco iyo kuwo kale
Waxaa jira fikrad ah in bisad aan wadada ku jirin uu leeyahay boodh. Macaamiil badan oo xayawaanka dhogorta leh ayaa ku fekeraya meesha ay ka imaanayaan
Bisadu waxay ka soo qaadi kartaa dulinka gurigeeda, waxaanan guriga keenaynaa guriga. Dhar ama kabo.
Ugu xun ee dhan haddii ilmuhu ku dhaco boodada. Maxay tahay iyo sida loo ciribtiro cayayaanka iyada oo aan waxyeello u geysanayn ilmo yar?
Daawooyinka xayawaanka ah ee loogu talagalay caruurta
Haddii aad ogaato in ilmuhu badanaa cuncuno, isku dayayo inuu wax qaniino xayawaankiisa isla markiiba baadhi doonaa xayawaankaaga. Haddii aad hesho boodada, isla markiiba qaado tallaabooyin si aad u disho.
Waxaa jira siyaaboyinka soo socda ee loola tacaali lahaa boodada ilamaha:
isku darka shanlo shanlo ah;
Ku dhaq dharka leh shaambo loogu talagalay in laga saaro dulin;
saarista dharka xayawaanka si loo dilo boodada;
isticmaalka cayayaanka xakamaynta cayayaanka.
Laakiin daaweynta waa in la sameeyaa si aanay u waxyeeleynin ilmo yar. Ka dib oo dhan, alaabta loogu talagalay dadka qaangaarka ah, ilmuhu ma fiicna. Aynu isku dayno inaanu ogaanno waxa la isticmaali karo iyada oo aan waxyeello u geysaneyn ilmaha.
Gaar ahaan si taxadar leh waxaad u baahan tahay inaad dooratid hab lagu baabiiyo boodada, haddii ilmuhu aan weli laga soo bixin hooyada oo nuugayo caanaha. Xaqiiqda, kiiskan, cayayaanka la isticmaalo marka la lalmayo ilmo yar ayaa caloosha caloosha ku jira, kadibna caanaha, kaas oo keeni kara sumowga ilmaha.
Isku dhufashada boodada
Qofka ugu naxariista badan oo aan wax dhibaato ah u geysanin daaweynta kiniinka. Isticmaal shanlo ama shanlooyin ilko qurxoon iswada daboolka si tartiib tartiib ah u kala saar dhammaan dhinacyada. La helay gacanta ku kala dooro boodada.
Si tartiib tartiib ah ha u damaanad qaadin oo u damaanad qaadin dhamaystirka dhamaystirka dulinka. Intaa waxaa dheer, bisaduhu ma ahaan doonaan kuwo daawanaya indho indheynaya.
Waxay sidoo kale, habka lulmayo timaha ilmaha, waxay soo qabtaa boodada. Habkani noloshu way u fududahay ilmahailaa ay ka korodho ilaa da'da sadex bilood, marka daaweynta sunta cayayaanka ku jirta ay suurtagal tahay.
Qubeysashada qashinka leh shaambada shaambada
Ka dib markaad isku dhajisid habka ugu fudud si aad uga saarto boodada xayawaankaaga. Shampoos badan ayaa loogu talagalay ujeedadaas sidoo kale waxay daryeelaysaa dhogorta. Tusaale ahaan waa shaambo "Celandine" oo uu soo saaray shirkad isku mid ah. Marka lagu daro xawaashka daawada, waxaa ku jira sunta cayayaanka oo aad u hooseeya. Sidaa daraadeed, waxaa loo isticmaali karaa in lagu maydho kittens laga bilaabo da'da laba bilood.
Marka aad iibsanaysid shaambo, wax dhakhtarka xoolaha waxuu weydiin doonaa da'da xayawaankaaga wuxuuna kuu sheegi doonaa habka ugu fiican. Markaad qubeysid koofiyuhu waxa ugu wanaagsan inaad raacdo taxanaha qaarkood:
Ku dar qadarka lagu taliyay ee shaambo biyaha una walaaq ilaa xumbo..
Ku rid qashinka ku jira caag biyo ah oo si fiican u qoyso jaakadda adoon u ogolaan biyo iyo xumbo in ay gasho indhaha, afka iyo dhegaha.
Ka dib markii dib loo dhigo 4-5 daqiiqo, ku dhaq saabuunyada saabuun leh biyo nadiif ah, diirran..
Waxaad ku qallajin kartaa jaakad qoyan leh timo qallajiye, laakiin habka ugu fiican waa in lagu duubo qashinka tuwaal qabadana gacmahaaga ilaa ay ka qoyaan..
Gacmaha xayawaanku si dhakhso ah ayuu u dejin doonaa oo diirranaan doonaa, sababtoo ah maahan dhammaan bisadaha u dulqaadka qubeyska.
Waa inaadan marin habka dharka lagu dhaqo had iyo jeer, si aadan u dhicin xajinta ilaalinta maqaarka xayawaanka. Si aad u sameyso habka nabdoon, waxaad samaysan kartaa shaambo gaar ah.
Karkari 300 garaam oo caws ah saabuun leh nus litir oo biyo ah oo ku dar tansy ama gooryaanka si aad u faleebooto..
In decoction ee keentay, ku dar dhawr dhibcood oo ah saliid kasta oo muhiim ah (roodhida, qoryaha, lavender) si kor loogu qaado saamaynta iyo comb dharka wanaagsan.
Ku kaydi maraq aan la isticmaalin ee qaboojiyaha ilaa saddex toddobaad.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaambada shaambada ee baalasha halkan ka akhriso.
Mid ka mid ah hababka ugu badan ee la isticmaalo ee ka soo horjeeda boodada ee jilcada waa in lagu daboolo dhibcaha qoorta iyo dhabarka xayawaanka si ay u dilaan dulinka.
Qaabka ugu caansan - waa dhibco iyo buufin "Advantage", "Stronghold" ama daroogada gudaha ee "Bars".
Digniin: Diyaargarowga loogu talagalay boodada ayaa la mamnuucay in ay isticmaalaan in ka badan laba dhibcood oo loogu talagalay caruurta yar yar ugu yaraan saddex bilood. Haddii kale, dhimashadu waa suurtagal.
Foomka la sii daayo - dhuunta polymeric ee mugga kala duwan. Baakada waxaa ku jira 4 tubo leh calaamadeyn:
laba baakadood oo leh 40 ml oo ah 0.4 ml - bisadaha miisaankeedu ka yar yahay 4 kiilo;
laba baako oo leh 80 ml oo ah 0.8 ml - bisadaha miisaankeedu yahay 4-8 kiilo;
ee bisadaha miisaankeedu ka badan yahay 8 kiiloogaraam, isticmaal isku-dhafka tuubooyinka ku salaysan heerka 0.1 ml of daroogada halkii kiilo oo miisaanka xayawaanka.
Tilmaamaha isticmaalka - burburinta daadinta iyo boodada ee bisadaha iyo eyda. Ka dib markii codsiga uusan u baahnayn isticmaalka soo noqnoqashada daroogada bil gudaheed. Marar dhif ah, bisadaha waxay leeyihiin casaan iyo cuncun, taas oo aan u baahnayn faragalinta iyo gudbinta iyada oo aan wax daawo ah lahayn. Ka hortagga isticmaalka aan la cayimin. Waxaa soo saaray Bayer AG, Jarmalka.
Foomka la sii daayo - dhuumo dhejis ah, waxay soo buuxiyeen saddex qaybood oo balaastik ah.
Tilmaamaha isticmaalka - burburinta injirta, iyo sidoo kale ka hortagga dib-u-qaadista. Waqtiga tallaabada ka hortagga ah waa hal bil laga bilaabo maalintii dhibcaha la isticmaalo Ma jiraan wax saameyn ah oo leh isticmaalka saxda ah.
Xitaa khatarta ah in la isticmaalo xayiraadda shakhsiyeed ee daroogada iyo cudurrada faafa ee xayawaanka. Kediska iyo bisadaha oo miisaanka jirka uusan ka badnayn 2.5 kg, dhuunta lilac leh mugga 0.25 ml ayaa loo isticmaalaa. Waxaa soo saaray Pfizer Animal Health, USA.
Foomka la sii daayo - Dareemayaasha polyetylen oo leh mugga 0.1 ml, saddex gogo 'baako.
Tilmaamaha isticmaalka - joogitaanka injirta xayawaanka, shilinta, boodada. Muddada ilaalinta ka dib codsiga waa qiyaastii 2 bilood. Dhibaatooyinka kale lama ogaan karo. Xaddidaadda isticmaalka cudurka xayawaanka iyo da'da ka yar saddex bilood. Waxaa soo saaray Agrovetzashchita, Russia.
Xeerarka codsigu waa mid sahlan.
Qalabkana ka saar bacda oo ku dheji qoorta xayawaanka.
Hubi in xayawaankaaga uusan ka soo bixin neefta oo aanad iska dabooli karin furaha keligiis..
Waqtiga shaqada - laba bilood.
Kabaha ay soo saareen shirkadaha Maraykanka iyo Jarmalka waxaa laga yaabaa in uu haysto ugu badnaan lix bilood.
Kuwa ka mid ah milkiilayaasha bisadaha ayaa loo tixgelinayaa ikhtiyaarka ugu fiican. Waa hagaagsan tahay dadka haysta bisadaha iyo bisadaha dheer. Waqtiga tallaabada wax ku oolka ah waa in ka badan nus sano.. Khasaaruhu waa awood la'aanta isticmaalka xoolaha, ka yar da'da 3 bilood.
Cayayaanka ayaa lagu daboolay sii deynta dabka gabi ahaanba maaha mid halis u ah bisadaha. Waa waxyaabaha ka mid ah shirkaddan waxaa laga helayaa nooca loogu talagalay carruurta, laga bilaabo da'da 1.5 bilood. Xaqiijinta calaamaduhu waxay la mid yihiin qalabka Hartz.
Waa muhiim: Xayawaanka ku jira xayawaankaaga ayaa tusi doona kooxaha si ay ula qabsadaan xayawaanka guri la'aanta ah ee aysan ahayn xayawaan aan qaloocan ahayn. I rumee, tani waxay ka muhiimsan tahay ka hortagga caabuqa by dulin.
Fursad wanaagsan oo looga hortago caabuqa boodada. Moodooyinka la soo saaray waxay u qaybsan yihiin miisaanka xayawaanka, biyaha aan haysan, Waqtiga wax ku oolku waa 4 bilood. Dhibaatadu waa karti la'aanta ah in uu qoryaha saaro xayawaan ilaa uu ka gaaro saddex bilood. Doorashooyinka da'da hore lama heli karo.
Collar Doctor Zoo iyo Barsik
Xalka guriga si looga hortago infekshanka bisadka leh boodada. Dareemayaashu waa kuwo aan qaali ahayn, ansax ah 2 bilood. Faa'iidada ugu weyn ee xidhitaankani waa maqnaanshaha falcelinta xasaasiyadeed inta lagu jiro isticmaalka. Khasaaruhu waa la'aanta fursadaha sii-deynta ee loogu talagalay carruurta yar yar ee ka yar 3 bilood.
Guddi: Ha iibsan doonin xayawaanka guryaha xayawaankaaga. Faa'iidada keli ah ee badeecadani waa kharash yar. Diidmada wax saameyn ah ma laha.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhri qoob-ka-sameynta baalasha ee maqaarka.
Ma aha inaynu u qaadanno in boodada aysan waxyeello u keenin. Naas-nuujintani waxay noqon karaan kuwo sidayaal ah dirxiga dirxiga. Sidaa daraadeed, ka dib burburinta boodada, ka hortagga dirxiga, iyo xayawaankaaga ayaa caafimaad qaba.
Gebogebo, waxaan kuugu soo bandhigi doonaa fiidiyo ku saabsan sida loo dhaqdo kiniinkaaga: